Anyị na-enyocha PLA CARBON site na FFFWORLD, filament nke 10 | Akụrụngwa n'efu
Ọ na-abụwanye ihe dị iche iche maka ndị nrụpụta dị iche iche ịgbalị ịmebe filaments dị iche iche site na iji ngwakọta nwere ihe mejupụtara dị iche iche na-agbanwe njirimara ndị metụtara ihe ndị a na-ahụkarị, PLA ma ọ bụ ABS dịka ọmụmaatụ.
Ke ibuotikọ emi anyị na-aga inyocha otu eriri igwe nke PLA Carbon filament nke nwa ojii Gbazinye ego site na Spanish emeputa FFFWORLD. Anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu na ọdịiche dị iche iche nke ihe a ma e jiri ya tụnyere ọkọlọtọ PLA filament.
Carbon PLA bụ filament PLA nke nwere eriri carbon. NAn usoro nhazi emeputara onu ogugu nke eriri carbon 5-10 μm na dayameta, nke na-tọrọ atọ n'etiti n'ígwé n'oge ibi akwụkwọ, na-enye dị iche iche n'ibu e ji mara iberibe e biri ebi na a filament.
1 Ighapu filament
2 Mbipụta nwere FFFWORLD PLA carbon Filament
3 Nkwubi okwu ikpeazụ banyere FFFWOLD PLA CARBON filament
FFFword amalitela OPTIROLL oru oma na akwukwo filament winding system nke na - eme ka enweghi eriri ga - eme nke ahụ nwere ike ịkpata nsogbu na mbipụta anyị. O doro anya na ọ bụ ihe ịga nke ọma, anyị ejirila eriri igwe niile mee ihe ma anyị enwetabeghị nsogbu ọ bụla nke eriri ma ọ bụ tangles n'oge ọ bụla. Ọ na-etinyekwa ngwakọta nke ihe site na usoro a na-akpọ DRYX2, usoro ihicha okpukpu abụọ maka ihe iji gbochie ya ịmịkọrọ mmiri.
Na mgbakwunye na filament Ẹnam ekese agụụ juru n'ọnụ, na akpa na-achọ ime na ime igbe kaadiboodu. Onye nrụpụta na-eme ihe niile dị ike iji hụ na ngwongwo ahụ ga-erute anyị n'ọnọdụ zuru oke ma ọ gaghị ewere mmiri.
Mbipụta nwere FFFWORLD PLA carbon Filament
Maka nyocha a, anyị ejirila onye na-ebi akwụkwọ ANET A2 PLUS. N'agbanyeghị ịbụ igwe dị ala (yana ọnụahịa dị ala karịa € 200 ma ọ bụrụ na anyị si na China zụta ya) ma ghara ị nweta nsonaazụ ọkwa dị oke elu, ọ zuru oke maka ọtụtụ ihe dị na ahịa. O nwere ukwu buru ibu na akwa di oku.
Ọ bụ ihe amamihe na-amalite site ịlele na ihe okpomọkụ anyị na ngwa nbipute extrudes ihe na ọ bụrụ na anyị bụ nnọọ purists anyị nwere ike ime ka a okpomọkụ ụlọ elu. Onye nrụpụta n'ime ihe ya niile na-agwa ụfọdụ ụkpụrụ nduzi ga-adịgasị iche dabere na njedebe nke onye nbipute anyị.
N'ihe banyere PLA Carbon ha bụ ndị a:
Mkpebi dayameta . 0.03 mm
Printing okpomọkụ 190º - 215º c
Hot bed okpomọkụ Nke ato-nke-anọ
Ọsọ akwadoro mbipụta 50-90 mm / s
N'ọnọdụ anyị karịsịa anyị ebipụtawo akụkụ na ọsọ ọsọ n'etiti 50 na 70 mm / s na a extrusion okpomọkụ nke 205 degrees na ọnọdụ okpomọkụ dị na 40 ogo bed kpụ ọkụ n'ọnụ na ọ dịghị oyi akwa ofufe. Ihe mkpuchi ahụ na-aga n'ihu, yana ezigbo adhesion na efere wuo na enweghị nsogbu na retractions. Mpempe akwụkwọ ndị e biri ebi dị oke mma na akwa na-aga n'ihu na mgbe niile.
Wide isi ihe obibi enyebeghị nsogbu nsogbu, ma anyị achọpụtala na ọsọ ọsọ dị elu karịa ndị a kwadoro na mgbe ị na-ebipụta ihe dị mgbagwoju anya nke chọrọ ọtụtụ nkwụghachi, enwere ike ịnwe nsogbu adhesion n'etiti ọkwa. Enweghi ndidi ma bipụta akụkụ nke ọ bụla na ọsọ a chọrọ ọkachasị ndị na-ebi akwụkwọ nwere sistemụ bowden, nke na-ata ahụhụ nke ukwuu mgbe ị na-achịkwa njigide ahụ.
Nkọwa dị ịtụnanya bụ ihe fechaa n'ihi ihe, a na-atụ aro ya ka ibipụta akụkụ chọrọ a nrụgide dị elu n'otu oge dị ka ọkụ. Anyị enweghị ike iguzogide ibipụta okpokoro na igbe maka obere obere ụgbọ mmiri anyị nwere n'ụlọ.
Anyị achọpụtakwara na obere ihe carbon carbon dị na filament na-enye ihe ahụ ezigbo nzaghachi maka ịkpụzi akụkụ ahụ. Nsonaazụ nke iberibe mpempe bụ iji nweta ihu ọma dị larịị na mgbe niile
Nke a bụ ihe ngosi ihe osise nwere onyonyo nke mpempe akwụkwọ ebipụtara:
Nkwubi okwu ikpeazụ banyere FFFWOLD PLA CARBON filament
O doro anya na anyị na-eche onye ọzọ ihu ihe ịga nke ọma site na onye nrụpụta FFFụwa , oge a mgbe ijikọta eriri carbon na PLA nke nkwenye zuru oke enwetara pụrụ iche n'ibu e ji mara.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ihe a dị 40% dị oke ọnụ karịa ọkọlọtọ PLA, nke 35 / n'arọ nke onye nrụpụta na-ere filament ahụ na-aga n'ihu ịdị n'okpuru nhọrọ ndị ọzọ sitere na ndị nrụpụta ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta n'ahịa. Ahụmịhe nke iji ihe a maka ọrụ pụrụ iche na-eme ka ọ baa ọgaranya site na ikwenye na ọ bụ nke ukwu mfe iji, enweghị warping na ezigbo viscosity.
A na-erekwa ya obere spools nke gram 250 maka € 14, ị gakwaghị enwe ihe ngọpụ iji guzogide ịnwale ya.
Ntụle nyocha a ọ masịrị gị? Miss na-atụ uche ọ bụla ọzọ na-egosi? Ga-achọ ka anyị gaa n'ihu na-enyocha ụdọ dị iche iche dị n'ahịa? Anyị ga-ege ntị na ihe ị hapụrụ anyị n'isiokwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Anyị nyochara PLA CARBON site na FFFWORLD, filament nke 10
668-R8WHm, ihe eji eme otutu nri na igwefoto HD na WiFi
Etu esi amata ma ọ bụrụ na anyị nwere mbadamba utu mbụ